» कसले सुधार्छ मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस ?
कसले सुधार्छ मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस ?
२३ मंसिर २०७६, सोमबार १०:३४
मकवानपुर । हेटौंडामा रहेको मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस, हामी यहीँ पढ्छौं । यहाँ धेरै जिल्लाबाट आफ्नो भविष्य उज्वल पार्नका लागि अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरु आएका छन् ।
त्यस मध्ये म पनि एक हुँ । म अहिले ११ कक्षामा पत्रकारिता विषय रोजेर आफ्नो अध्ययन अघि बढाइरहेको छु । म पनि अन्य विद्यार्थी जस्तै भविष्य उज्वल बनाउन यहाँ आए । यहाँ भर्ना हुनु अघि मलाई धेरैले भनेका थिए, त्यो कलेजमा किन पढ्न लागेको? खाली हड्ताल झैं—झगडा मात्र भैरहन्छ । तर मैले त्यो आवाज नसुनी क्याम्पस भर्ना भएँ ।
म क्याम्पस भर्ना भएको लगभग तीन महिना बित्यो । यहा“को हरेका गतिविधि मलाई अचम्म लाग्छ । क्याम्पसमा नियमित हाजिरी हुनुपर्छ । तर मेरो कक्षामा आजसम्म हाजिरी भएको छैन् । ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म हाजिर नभई परीक्षा दिन नपाईने नियम लागू भैसकेको भन्ने सुन्छु तर यहा“ भने हाजिरको रजिष्टर हेर्न समेत मुस्किल छ ।क्याम्पसले कसरी र के गरी विद्यार्थीको उपस्थितीलाई हेरि परिक्षामा समेल गराउँछ भन्ने प्रश्न मेरो मनमा खडा भैरहन्छ ।
यो त भयो हाजिरको समस्या । क्याम्पसको कमजोरीसंगै विद्यार्थीको पनि कमजोरी मिस्सीन आँउछ । यहाँ विद्यार्थीको जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला उपस्थिती भइदिने र क्याम्पस छोडेर गइदिने पनि अर्को समस्या हो । हामी पढिरहेका हुन्छौ तर विद्यार्थी साथीहरु कक्षा सञ्चालन भइरहेको बेला आइदिने र गइदिने गर्ने पनि समस्या छ ।
विद्यालय तथा क्याम्पसबाट १०० मिटर परसम्म धुम्रपान तथा मध्यपान राख्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ तर यहाँ खुलेआम क्याम्पस अगाडीनै चुरोट, सुर्ती बेचिन्छ । विद्यार्थीलाई क्याम्पस पोशाकमै उक्त चिजहरु दिइन्छ यसमा ध्यान जाने कस्को? यो केवल क्याम्पसको मात्र लापारवाही होइन, यसमा हामी जस्ता विद्यार्थी पनि जोडिन जान्छन् ।
क्याम्समा पढ्ने वातावरण नभएको होइन । त्यहाँ पढ्ने वातावरण छ तर पनि शुल्कमा हुने वृद्धि, अन्य मागहरुको लागि छलफलमा सहमति किन हुदैन? यो काम प्रशासनले गर्न सक्दैन् र?
यहाँ हुने कुनैपनि गतिविधिमा किन प्रशासनले ध्यान दिदैन ? साँच्चै यदि प्रशासनले राम्रोसँग ध्यान दिने हो भने, यहाँ हुने हरेक नराम्रा गतिविधिहरु रोकिन्थे कि ? विद्यार्थीलाई खै त कडा अनुशासन? हामीलाई मात्र पढ्ने वातावरण चाहिएको हो ।
-लेखक शिवाकोटी हेटौंडा युवा अभियानका संयोजक समेत हुन् ।